Nke a bụ a 5-esi anwụde na 10 payline oghere ma a Tekno-eche na ya. The upbeat soundtrack na-eji ire ụtọ gameplay-eme ka ọ ọbụna ọzọ na-akpali. It is all about slot free spins and multipliers. Enweta ya na niile ngwaọrụ egwuregwu a nwere ike ịbụ na gị onwe gị mini oghere igwe.
Banyere Ndị Mmepe nke Joker Pro ohere mpere
Nke a oghere e mepụtara site NetEnt. guzosie ike 1996 NetEnt ka pụrụ iche na-enye àgwà cha cha egwuregwu. Ama n'ihi na ya ọnwụ onu technology ha adịghị na-adọta mmasị na bụla ọhụrụ egwuregwu.
Nke a bụ a 5 ukwu na 10 payline oghere na a nnọọ mfe gameplay. Egwuregwu na-ngwa ngwa paced na nwere a futuristic isiokwu. The upbeat soundtrack kpam kpam Ekele isiokwu. The background is filled with these glittery lights that make the symbols stand out It is all about slot free spins and be prepared to be rewarded with lots of these. The akara na ukwu-agụnye Ogwe, hey, diamonds, akpukponu inyinya, atọ 7s na a klova. The diamond n'etiti niile bụ ndị kasị elu na-akwụ ụgwọ na akara ma ọ bụrụ na 5 ndị a n'ala on your akwụ edoghi ọ pụrụ award unu 200x nke gị akara ahụhụ ma ọ bụ 20x gị dum nzọ ma ọ bụrụ na ndị a na-abịa na otu payline.
The ikposa akara bụ joker okpu. Ọ bụrụ na ị na adaa otu ma ọ bụ karịa n'ime ndị a na ukwu 2,3 and 4 ị ịkpalite Re-spins Njirimara. Na nke a mma ma ndị na-esi anwụde, ọnụ ọgụgụ 1 and 5 atụgharịa n'ime ọhịa na-esi anwụde na a hotspot na-egosi na n'etiti 2,3 and 4. Ọzọkwa, na ikposa ihe na-akpali atụmatụ ga na-atụgharị n'ime nnyapade ọhịa. Every wild symbol that lands during the slot free spins or re-spins will trigger this feature again and will also stay there as the sticky wild. The ọhịa nwere ike na-egosi na n'etiti atọ na-esi anwụde na pụrụ ịnọchi anya ihe oyiyi ọ bụla ma e wezụga ihe ikposa akara.
Nnukwu mmeri na-abịa mgbe ndị atọ ọhịa akara adaa na enwu enwu ntụ ọkụ. Ị ga-emeri 1000x gị n'elu osisi na Re-atụ ogho mma ga-akwụsị.
Nzọ opekempe size bụ 10p na kacha bụ £ 100.
a 5 reels 10 payline slot is easy to play and the slot free spin feature is very rewarding. The gameplay bụ ngwa ngwa paced na nnọọ ezigbo. The jackpot bụ nnọọ nnukwu na ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị emeri jackpot, ị ga-emeri ihe.